: at 5/29/2010 08:00:00 PM
ဆီနီယာ အကိုကြီးတယောက် ၊မိသားစု နဲ့ အခြေအနေ အရ ခွဲနေရတာ ကြာပါပြီ ၊ သူက ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူ နဲ့ သား ၂ယောက် ၊ သမီးတယောက် ကို ကနေဒါနိုင်ငံမှာ နေထိုင် ၊ ပညာသင်စေပါတယ် ၊ သူ့ ကို မေးကြည့်မိတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့မိသားစု တူတူ မနေကြတာ လည်း ၊ဆိုတော့ သူ့အမြင် ကို ပြောပြတယ် ။ ဒီထိုင်ဝမ် နိုင်ငံက ပညာရေး စနစ် ကို လည်း သိပ် သဘော မကျ လို့ရယ် ၊ လူနေမှု ပါတ်ဝန်းကျင် နဲ့ စရိုက် တချို့ ကို မနှစ်သက်တာ ကြောင့်ရယ် ၊ သူ့ သားသမီးတွေ အတွက် စဉ်းစားပြီး ဒီလို ခွဲနေရတဲ့ အကြောင်းပေါ့ ။သူ့သားအကြီးလေးကို မြန်မာ ပြည်မှာ ပဲ မွေးဖွားခဲ့တာ ပါ ။ ၅ နှစ်သား အရွယ် ဒီရောက် ။ မူကြို နဲ့မူလတန်း အဆင့် ၄ တန်းအထိ ဒီမှာတက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ဟို နိုင်ငံ ကို သွားပြီး နေထိုင် ပညာ သင်တယ်ပေါ့ ။ အဲ့ဒီအကိုကြီးက တနှစ် တခါ သူ့မိသားစုဆီ သွားတွေ့ တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ကလေးတွေက တဖြေးဖြေးကြီးလာ ကြပြီး သူ တို့အဖေနဲ့ နေထိုင် ပြောဆို တွေးခေါ်တာမှာ အဆီအငေါ် မတည့် ချင်တော့ ဘူး၊ ဟိုနိုင်ငံ ပြောင်း ၊ ဒီနိုင်ငံ ပြောင်း နဲ့ နေရပြီး အဖေနဲ့တခါတလေ မှ တွေ့ ကြရတော့ ဒီကလေး ရဲ့စိတ်ထဲ ဘယ်လို အတွေး ပေါက်တယ် မသိ ။ ဟိုးတလောက သူ့အဖေဆီ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံ နဲ့ မေးလ် တစောင် ပို့ လာပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ ၊ ကိုယ့်အတွေး အမြင် နဲ့ ရောသမမွှေကာ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ နေထိုင်သူ လူတွေ သန်းပေါင်းများစွာ ၊ လူ မျိုးစုပေါင်း များစွာ ရှိနေကြတယ် ။အဓိက အားဖြင့်အရှေ့ တိုင်း သား နဲ့အနောက်တိုင်းသား ရယ်လို့ ထင်ရှားကွဲပြား နေကြတယ် ။ ဘာသာစကား၊ ဓလေ့ ထုံးစံ ၊အကျင့်စရိုက်၊စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ၊ အယူအဆ ။ နေထိုင်ပြုမူပုံ၊အသားအရေ ၊ အစရှိ တာတွေ မတူကြပါဘူး။ကဲ ... ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ။ အပြာရောင် က အနောက်တိုင်းသား ၊ အနီရောင်က အရှေ့ တိုင်းသား တွေကို ကိုယ်စားပြုတယ်ပေါ့ ။
Key: Blue --> Westerners / Red --> Asians
လိုရင်းတိုရှင်းပြောတတ်သူ နဲ့ကွေ့ ကာကောက်ကာ ပြောပြီး၊ နောက်ဆုံးတော့ ဒီဘူတာပဲ ဆိုက်သူများ ...ဘယ်သူ့ကို့ ရွေးမှာလည်း ။ အတိုကြိုက်လား အရှည်ကြိုက်လား ..
(အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆို လိုရင်းတိုရှင်းပဲကောင်းတယ်နော် ။ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်း ချစ်ခန်း ကြိုက်ခန်းတွေဆို ရှည်လေ ကောင်းလေ ထင်သူများ မနည်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ် )
Asians: enjoy gathering with family and friends, solving
their problems, and knowing each other's business.
အနောက်တိုင်းသားများက တဦးတည်း သီးခြား နေတယ် ။ ကိုယ့်အရေးဘဲ ကိုယ်တွေးတယ် ။ ကိုယ်တို့အာရှသားတွေကတော့ မိသားစု၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုစုဝေးဝေး နေကြတယ်။ တဦးကိစ္စရှိရင် ဝိုင်းဝန်း ဖြေရှင်း ပေးကြတယ် ။ စပ်စပ်စုစု တွေပါ ။( ကိုယ် ကတော့ အရေးကိစ္စမရှိတဲ့ အချိန် အနောက်တိုင်းသားလို ။ ကိစ္စပေါ်လာရင်တော့ အရှေ့ တိုင်းသား လို နေချင်တယ် ။ အဲ့လိုဆို လိုချင်မှ လာတယ်ပြောကြမယ် )
အနောက်တိုင်းသား နော် .. အချိန်တိကျတယ် ။
အာရှသားတွေနော် .. လိုတိုး ပိုလျှော့ လို့ရအောင်ကို အမျှော် အမြင်ကြီးကြ ပါပေတယ် ...( ဥပမာ ..ဟို နေ့လွှတ်မယ် ဒီနေ့ လွှတ်မယ် ပြော ပြီး ။ နေ့ ရွှေ့ ညရွှေ့ ၊ ရွှေ့ လို့ ရတယ် .. မြန်မာစံတော်ချိန် ဆို ပိုမိုက်ပါတယ်။ အချိန်မီ အတိအကျ ထွက်တဲ့ ဆိုက်တဲ့ ကားတွေ ရထားတွေ လေယာဉ်တွေ အတော်ရှားပါတယ်။ )
အနောက်တိုင်းသားတွေ ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး က ဒါရိုက်ဘဲ ၊ လိုတာကို ဒီလို ဆက်သွယ်တာ ကောင်းတယ် ။ စာရင်းဇယား မရှုပ်တော့ဘူး ပေါ့ ။ အချိန်ကုန်သက်သာမယ် ။ ဒီကိစ္စကို ဒီလူနဲ့ဆက်သွယ် ၊ ဒီလိုလုပ် ဆို ဇာတ်လမ်းက ပြီးပြတ်ပြီ ။
အာရှသားတွေနော် ။အသိုင်း အဝန်းလေးတွေ သိပ်ကြိုက်ကြတယ် ။ သပွတ်အူဇာတ်လမ်းတွေ ခင်းနေကြတာ လိုရင်းမရောက် ။ ( ကားပွဲစားတန်းက ပွဲစားများ၊ အိမ်ပွဲစားများကို သတိရမိပါတယ်။ ရောင်းသူ နဲ့ ဝယ်သူကြားမှာ မြောက်များလှစွာသော ကြားလူများ မပါရင် မပြီး ။ ဒီလို net work ကြီးရှိနေမှလည်း သူတို့ ထမင်း မငတ်မှာလို့ခွင့်လွှတ်စိတ် နဲ့တွေးပေးလိုက်တယ် )
အနောက်တိုင်းသားတွေက ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ် ၊ မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဖူး ၊ ပေါ်တင်ပြောတတ်သလို မျက်နှာ အမူအယာ လည်း ပေါ်တင်ပြတာ ။
အရှေ့ တိုင်းသားကျ ဒီလို မဟုတ် ။ ဒီတချက်တော့ ကြောက်ပါတယ် ။
အတွင်းမှာ ပုတ်ပြီး အပြင်မှာ သကာချို လောင်းထားကြသူများ အတော်များပါတယ် ။ ကျောချမှ ဒါးပြ မှန်းသိရတာ လက်တွေ့ ခံရသူတွေ လည်း ရှိကြ မှာ ပေါ့ ။
အနောက်တိုင်းသား များ စည်းကမ်းရှိ်ကြတယ် ။ တန်းစီရမဲ့ နေရာဆို စနစ်တကျ တန်းစီလို့ လေ။
အရှေ့ တိုင်းသား များ “ တန်းစီတယ်ဆိုတာ ဘာလည်း ၊ ဘယ်လိုစီရမလည်း ” နားမလည် ။ ဒီလို ဝိုင်းအုံပြီး စီကြတယ် ။ အဲ လေ .. တိုးကြတယ် ။( ငယ်ငယ်တုံးက သမဝါယမဆိုင် မှာ ဆန်၊ဆီ၊ရေနံဆီ တန်းစီ ခဲ့ ရတာ သတိရမိတယ် ။ဒီလို ဝိုင်းအုံကြလို့အိုးနင်းခွက်နင်း တကယ် အနင်းခံခဲ့ရဖူးပါတယ်)
အားလပ်ရက်မှာ ဘယ်လို အပန်းဖြေမလည်း ။
အနောက်တိုင်းသားများ လမ်းပေါ် သိပ်မထွက်ကြ ။ ငြိမ်းအေးစွာ စိတ်အပန်းဖြေကြတယ် ။
အရှေ့ တိုင်းသားတွေ ၊ အားလပ်ရက်မှာ အားလုံးလိုလို လမ်းထွက်ကြတယ် ။ လူစီ လမ်းသလား များပေါ့ကွယ် ။( ကိုယ်တိုင်လည်း အားရင် လမ်းသလားရတာ ကြိုက်ပါတယ် )
အနောက်တိုင်းသားများက ကိုယ့် အဖွဲ့ လေးနဲ့ကိုယ် နေကြတာ များတယ် ။ အရှေ့ တိုင်းသားတွေ ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ ပိုစည်ကား သိုင်းဝိုင်းကြပါတယ် ။
စားသောက်ဆိုင်မှာ ဒီလိုနေတယ် ။
အနောက်တိုင်းသားများ... တိုးတိတ် ဆိတ်ငြိမ်စွာ စားသောက်ကြတယ်။
အာရှသားများ... စကား များများ ၊ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဆိုကြသဗျား ။ ( ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်များ မှတ်နေကြတာလားမသိ ။ ဒီက တရုပ်လူမျိ်ုးများ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားရင်း ပြောဆို နေကြပုံတွေကတော့ မသိတဲ့သူ ဆို ရန်ဖြစ်နေကြတယ် ထင်ရလောက်အောင်ပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ဂျပန်လူမျိုးများကြတော့လည်း ဟိုတယ်မှာ စားသောက်နေတုံး ဘာသံမှ မကြားရလောက်အောင် ရှိတာ မြင်ဖူးတယ် ။ အရက်ဆိုင်မှာ ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ပါ ။)
Westerners: Love sightseeing and enjoying the scenery.
ခရီးလမ်းသွားရင် ဒီလို ကွာခြားကြတယ် ။
အနောက်တိုင်းသား ။ သဘာဝ အလှ ရှုခင်းတွေကို မျက်စိ နဲ့ ကြည့် မြင် ခံစား ပြီး စိတ်ထဲ မှတ်တမ်းတင်ကြတယ် ။
အရှေ့ တိုင်းသား ပဲခပ်များများ ။ မြင်မြင်သမျှ ရိုက်ပါတယ်၊ တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ ပေါ့ကွယ် ။ သဘာဝရှုခင်းဆိုတာ နောက်ခံဖို့ပဲ ထားပါတယ် ။
အနောက်တိုင်းသား ။ ပြဿနာ တခုကို အဆင့်တိုင်း ဖြေရှင်းလေ့ ရှိ်ကြတယ် ။
အရှေ့ တိုင်းသား ။ ပြဿနာကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် မဖြေရှင်းကြဘူး ။ နောက်လူအတွက် လမ်းစပါပျောက်စေတယ် ။
တစ်နေ့၃ နပ်စားကြရာမှာ အနောက်တိုင်းသားများက တစ်နပ်ကောင်းကောင်းစားရင် လုံလောက်ကြပေမဲ့အာရှသားတွေက အနည်းဆုံး ၃ နပ်ကောင်းကောင်းစားကြတယ် ။( ရွှေပြည်သားအများစုမှာတော့ တနေ့ကို ခပ်ညံ့ညံ့လေး တစ်နပ် မှန်မှန်စားရအောင်တောင် မတတ်နိုင်ကြတာတွေ ရှိတယ် )
(13) Tran sportation
ခရီးလမ်း ဆက်သွယ်သွားလာရာမှာ အနောက်တိုင်းသားများဟာ ယခင်က ကားမောင်းကြပေမဲ့ ခုချိန်မှာ စက်ဘီးစီးနင်းကြခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို လုပ်ဆောင်ကြတယ် ။ယခင်က ပိုက်ဆံမရှိလို့စက်ဘီးသာစီးရတဲ့ အာရှသားများကတော့ အခု ကားမောင်းနေကြတယ် ။
အသက်ကြီးလာတဲ့ အနောက်တိုင်းသားများရဲ့အဖေါ်က ခွေးလေး ( တိရစ္ဆာန်လေး ) တွေ ဖြစ်ပြီး အာရှလူအိုများကတော့ ကလေးငယ် မြေးငယ်တွေကို အဖေါ်ပြုကာ အထီးကျန် မဖြစ်အောင် နေကြတယ် ။
ရာသီဥတု နဲ့စ်ိတ်ပျော်ရွှင်မှု ။ အနောက်တိုင်းသား တွေက ဥတုပေါ်တည်ပြီး ပြောင်းလဲတယ် ။မိုးရွာရင် မပျော်နိုင်မရွှင်နိုင် ။ အာရှသားတွေ ဒါတခုတော့ ကောင်းတယ် ၊ နေပူပူ မိုးရွာရွာ အပြုံးမပျက် နေနိုင်ကြတယ် ။
အနောက်တိုင်းသားများအဖို့သူဌေးနဲ့အလုပ်သမား တန်းတူ ပဲ ။ သူဌေးဆိုတာ လူတန်းစားတခု သပ်သပ်မဟုတ် ။ သူ့ အဖွဲ့ ရဲ့တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့သာရှိပြီး၊ အာရှသားတွေ အတွက်မတော့ သူဌေးဆိုတာ ရက်စက်တဲ့ နတ်ဘုရားဆိုးတဆူလို ထင်ကြရတယ် ။ ( ရွှေပြည်ကြီးမှာ သူဌေး နဲ ပေလို့တော်သေးတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ရှိတဲ့ သူဌေးနဲနဲ က ၊ အတော်ဆိုး နေကြတာ ပဲ။ )
အစာအဟာရ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အယူ အကျင့်တွေ ပြောင်းကုန်ကြပြီ ။ခုဆို အနောက်တိုင်းသားတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အာရှစာတွေ စားသုံးလာကြပေမဲ့၊ အာရှသားတွေကတော့ ကျန်းမာရေးမညီညွတ်တဲ့ အနောက်တိုင်းစာတွေကို ဈေးကြီးပေးပြီး စားနေကြတယ် ။
အနောက်တိုင်းသားတွေဟာ ကလေးတွေကို တဦးချင်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ပြီး လွတ်လပ်စွာနေတတ်စေပေမဲ့ အာရှသားတွေမှာတော့ သူတို့ တဘဝလုံးကို ပင်ပန်းကြီးစွာ နဲ့ ကလေးအတွက် ပေးဆပ်ကြတယ် ။
ဒီလို နဲ့၊ လူချင်းတူပေမဲ့ အသက်ရှုပုံချင်းကွဲ နေကြတာ တွေ အများကြီးပါပဲ ။ ဒီလို မတူညီတာတွေကို သဟဇာတဖြစ်အောင် နေထိုင်ကြဖို့လူတိုင်းတတ်နိုင်ကြပါ့မလား ။ စာဖတ်သူရော ဘယ်အမျိုးအစား ကို ပိုနှစ်သက်ပါသလည်း ။
:kiki : at 5/29/2010 08:00:00 PM
ahphyulay said... | Saturday, May 29, 2010 8:35:00 PM
ဝူး.... မော လိုက်တာ။
ခုမှ ရောက်လို့ ။ ဖတ်လိုက်ဦးမယ်... အဟမ်း...။
ahphyulay said... | Saturday, May 29, 2010 8:46:00 PM
နောကဆုံး တော့ 
အနောက် နဲ့ဆန့် ကျင် နေတဲ့ 
အကျင့် တွေ အား လုံးက အရှေ့တိုင်းမှာ
ရှေ့ ဆောင် လမ်းပြ ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော် တို့ 
ရွှေပြည်ကြီး မှာ သွားစု နေတော့ တာကိုး လို့။
အခု ဆို ပို လို့ တောင် ခေတ်မှီ လာ တော့ မယ် ။
ပု ဆိုး တန်းလန်းကြီး တွေ နဲ့တို့ အစိုးရ စံပြ အစိုးရ
အာရှ ရဲ့မီးရှုးတန်ဆောင် အစိုးရ ပေါ် တော့ မယ်လေ။
( အင်း.. ဆိုင်မဆိုင် တော့ မသိ )
ညီမလေး said... | Saturday, May 29, 2010 8:58:00 PM
ဒီပုံလေးတွေကို ဟိုးးတုန်းက မေးတွေထဲမှာဖတ်ဖူးတယ် ။ အဲ့ကတည်းက သဘောသိပ်ကျတာပဲ ။ လိုက်ဖ် စတိုင်တွေမတူကြတာတွေထဲမှာ အရှေ့နဲ့အနောက် တိုးတတ်မှု အခြေအနေ ကွာခြားနေတာလဲ ပါမယ်ထင်တယ် ။
စကားမစပ် ... မမကိကို တခုလောက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ။ အမအချိန်ရတဲ့ အခါ Migraine အကြောင်းလေး ရေးပေးပါလား ။ အမအချိန်ရတဲ့ခါမှပါ။ ရောဂါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမရှင်းပြတဲ့အခါ သိပ်နားလည်လွယ်ပြီး ခေါင်းထဲလည်းကျန်တယ် ။ ပြီးတော့ညီမလေး Migraineအကြောင်းလဲသေချာသိချင်လို့ပါ။ ကုမရဘူး သေရာပါတဲ့ရောဂါလို့ပြောကြလို့ အဲ့ဒါကော တကယ်လားလို့ပါ ။ အမအားတဲ့အခါ ရေးပေးနော် ။
SHWE ZIN U said... | Saturday, May 29, 2010 9:18:00 PM
အင်း မကိ ရေ ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ
ရွှေစင်ဦး ကတော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ပါဘဲ
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Saturday, May 29, 2010 9:22:00 PM
နတ်ဆိုးလေး said... | Saturday, May 29, 2010 9:25:00 PM
မိုက်တယ်ဗျ compare လုပ်ပုံလေးတွေ သဘောကျတယ်.. ပုံလေးတွေ က ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာ မြင်သာတယ်..
Anonymous said... | Saturday, May 29, 2010 9:27:00 PM
အရှေ့ကို လျှောက်ပါလို့ အနောက်ကိုတဲ့မျှော်လိုက်ရင်..
အဲဒီတော့ မျှော်လျှောက် လျှောက်မျှော် ရတာပေါ့ဗျာ အမရွှေစင်ညီမဆိုတော့ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် ပေါ့နှော ရွှေပြည်သူဆိုတော့ အဲဂလိုတိကျတာ အားကျနေပြီမဟုတ်လား
လသာည said... | Saturday, May 29, 2010 9:47:00 PM
မကိရှင်းပြလိုက်တာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပဲ..။ ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ..။ ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်.. မှန်လိုက်တာနော်။
မတူတာတွေကို တူအောင်လည်း မညှိနိုင်တော့ အရှေ့တိုင်းသူပီပီ အရှေ့တိုင်းနည်းအတိုင်း ကျင့်သုံးဖြစ်နေတော့မယ် ထင်ပါတယ်..
Flower said... | Saturday, May 29, 2010 10:29:00 PM
ညီမတော့ အနောက်တိုင်းရဲ့ အချို့အချက်တွေကိုသဘောကျပြီး
အရှေ့တိုင်းရဲ့ အချက်တော်တော်များများကတော့ ကိုယ်နဲ့အသားကျနေပြီးသားမို့
သဘောမကျလဲ ကျင့်သုံးနေမိပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။
ပြီးတော့လဲ အရှေ့တိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်က နွေးနွေးထွေးထွေး နေတတ်ကြပြီး အနောက်တိုင်းသားတွေကျ ဘာသိဘာသာ နေတတ်ကြတယ်လေ..
ကိုယ့်မိသားစုတွေနဲ့ဆို ဒီလိုကြီးတော့ မနေချင်ပါဘူး..
ကောင်းပါတယ်လေ.. နော့်.. ရွှေပြည်သူပီပီ.. ကိုယ်တိုင်လဲ အချိန်မမှန်ပါဘူး..း)
ကိုဇော် said... | Saturday, May 29, 2010 10:52:00 PM
အရင်က မေးလ်မှာ တွေ့ဖူးတယ်။
ဒါပေမဲ့ . .အခု မကိ ရှင်းပြတာ ပိုပြီး မြင်သာတယ်။ ( မှတ်ချက်တွေကြောင့် ထင်တယ် :P )
တကယ်တော့ အရာရာကို ဆွဲပြီး မတူညီနိုင်ဘူး ဆိုတာ ဒီနေ့တော့ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစွာ သဘောပေါက်လိုက်မိပြီဗျာ။
( ဒါနဲ့ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ပဲ တစ်ခု မေးပါရစေ။ ဖျက်လိုက်တဲ့ Comment တွေပြန်ယူလို့ ရလားဟင်။ တကယ် မသိလို့ပါ။ )
သိင်္ဂါကျော် said... | Sunday, May 30, 2010 12:39:00 AM
မတူတဲ့ ဓလေ့လေးတွေ လေ့လာသွားပါတယ်..
Anonymous said... | Sunday, May 30, 2010 3:42:00 AM
ဒီမှာ ကိုယ်တွေ့ဖူးတဲ့ ဗမာ တချို့  ကတော့ နေတာထိုင်တာ လုပ်တာကိုင်တာ တချို့  ဘို ဆန်ပြီး အချိန် တိကျ ဖို့ ကျတော့ လိုက်အတု မခိုး ကြတာ တွေ့ နေရတယ် .... ရေးထားတဲ့ အချက်တွေထဲ နံပတ် ၇ နဲ့ ၁၅ ကိုတော့ သဘောမတူပါ .... သည်မှာ တွေ့ရ သလောက်တော့
ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလား လို့ ...
အင်ကြင်းသန့် said... | Sunday, May 30, 2010 9:15:00 AM
မမကိကိရေ....အရင်က ဖော်ဝဒ်မေးလ်ရလို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ မတူတာတွေကတော့ ဟိုးအရင်ကတည်းက မတူခဲ့သလို နောင်လည်း တူနိုင်ဖွယ် မမြင်ပါဘူး။ အရှေ့တိုင်းမှာရော အနောက်တိုင်းမှာရော ကိုယ်သဘောကျတာ ရှိသလို သဘောမကျတဲ့ အမူအကျင့်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကိုယ်တွေနေထိုင်ရာအရပ်ဒေသနဲ့ သင့်တော်မယ့် လိုက်လျောညီထွေရှိမယ့် အမူအကျင့်မျိုးကိုပဲ ကျင့်သုံးမိနေတာပါပဲ။ တစ်ချို့အမူအကျင့်တွေကျတော့လည်း အရိုးစွဲနေပြီ ပြင်လို့က မရတော့ဘူးလေး)))
လငျးခတျေဒီနို said... | Sunday, May 30, 2010 10:42:00 AM
ဖွားကိ တကယ် အမြင်ရတယ် . . . မှန်လိုက်တာ ရေးထားတာတွေ ရှဲရှဲ ဖွားကိ
rose of sharon said... | Sunday, May 30, 2010 10:50:00 AM
တော်တယ်ခိခိ... သေသေချာချာကိုစားရင်းပြုစုထားတယ်... ဒို့ကတော့ အရှေ့ရောအနောက်ရော မကောင်းတာပယ် ကောင်းတာသယ်ပြီး ရောသမမွှေလိုက်တာဘဲ
မယ်ကေး said... | Sunday, May 30, 2010 12:57:00 PM
အဲဒါတော့မသိဘူး အနော်တို့ကျောင်းကရုရှင်ဆရာမဆို အတန်းအဝင်ကိုကျတော့ နောက်ကျတယ် အတန်းပြီးတာကျတော့ တိကျတယ်.. သူတော့ ဘယ်အုပ်စုထဲ ထည့်ရမည်မသိ.. :)
ခြင် said... | Sunday, May 30, 2010 1:23:00 PM
ကိရေ... ပုံအောက်က ပါလာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေထက် ပုံလေးတွေရဲ့ အဓိပါယ် ကိုလိုသလို ဆွဲတွေးရလို့ ကြိုက်တယ်...
Unknown said... | Sunday, May 30, 2010 2:41:00 PM
ဝက်ဝံလေး said... | Sunday, May 30, 2010 6:13:00 PM
ဘယ်ဟာကို နှစ်သက်လဲလို့တော့ အဲလိုမေးလို့ရဘူးဗျ
တချို့ဟာတွေကျတော့ အရှေ့တိုင်းကို သဘောကျတယ် တချို့ဟာတွေကျတော့ အနောက်တိုင်းကို သဘောကျတယ် ဟက်ဟက်
Nge Naing said... | Sunday, May 30, 2010 7:12:00 PM
ကျွန်မကတော့ အရှေ့တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အနောက်တိုင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတယ်ထင်တာ အကုန်ယူတယ်၊ မကောင်းဘူးထင်တာ အကုန်ပယ်တယ်။
မြတ်နိုး said... | Sunday, May 30, 2010 9:24:00 PM
၁။ opinion အတိုပါ။ ဝေ့တာဝိုက်တာစိတ်မရှည်ဘူး။ဒဲ့ပဲကြိုက်တယ်
၂။way of life အာရှသားအတိုင်းပဲကျင့်တယ်။ တယောက်တည်းသီးခြားနေချင်ဘူး
၃။ Punctuality အချိန်တိကျတာကို ၉တန်းနှစ်ထဲက ဆရာ့ဆီကအကျင့်ကို ယူထားသလို အချိန်နောက်ကျသူကိုလဲ စိတ်မရှည်ဘူး။ မနှစ်သက်ဘူး။
၄။contacts က အနောက်တိုင်းသားအတိုင်းပဲလုပ်တယ်။ အဓိက ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့သူဆီဒဲ့သွားတွေ့လိုက်တယ်။တွေ့ခွင့်မရရင် အပေါက်ကနေ မတွေ့မချင်းမပြန်ဘူး
၅။Anger အနောက်တိုင်းသားအတိုင်းပဲ။ ပေါ်တင်ပြတယ်။ မရီနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ဒေါသထွက်ရင်တတ်နိုင်သမျှ ခဏရှောင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
၆။Queue when waiting စနစ်တကျတန်းစီရတာကြိုက်တယ်။
၇။ Sundays on the road အနောက်တိုင်းသားစတိုင် ပဲ အေးချမ်းတဲ့နေရာတွေလျှောက်လည်ချင်တယ်။ shopping ၀ါသနာမပါလို့
၈။Party အဲဒါတော့ ၂ခုလုံးစတိုင်လုပ်တယ်
၉။in restaurant အရှေ့တိုင်းသားစတိုင်ပဲ..ဟဲဟဲ
၁၁။Handling အနောက်တိုင်းသားစတိုင်ပဲလုပ်တယ်။ တဆင့်ပီးတဆင့်ဖြေရှင်းသလို ထွက်ပေါက်တွေကိုလည်းကြိုစဉ်းစားတတ်တယ်
၁၂။three mealsaday ဟဲဟဲ..မီးက အစားသမားပါ။
၁၃။Tran sportation ဟီး.. ကားမောင်းတတ်ထားချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးကပဲလိုက်စီးချင်တယ်။ စက်ဘီးလည်းစီးပါတယ်။
၁၄။Elderly in day-to day lifeအရှေ့တိုင်းသားလိုပဲနေချင်ပါတယ်
၁၅။Moods and weather ဟင့်အင်း မြန်မာပြည်မှာထဲက ရာသီဥတုမှိုင်းချိန်မှာ ကိုယ်ဝတ်ထားမိတဲ့အရောင်ဟာမှိုင်းနေရင် စိတ်ကမကြည်ဘူး တခါတခါ ဒေါသတောင်ထွက်တယ်။ ပူရင်လဲ မနေနိုင်ဘူး။
၁၆။The boss အဲဒါတော့ မသိဘူး။
၁၇။What's trendyဟင့်အင်း အရှေ့တိုင်းစာပဲ ကြိုက်တယ်
၁၈။ The child ၂ခုလုံးအယူကိုမျှတစွာသုံးချင်တယ်။
သုခုမလေဒီ said... | Sunday, May 30, 2010 9:49:00 PM
1. Opinion အနောက်တိုင်းသားကိုနှစ်သက်ပါတယ်
2. Way of Life ကတော့ တ၀က်စီပေါ့ :D
3. Punctuality လည်း အနောက်တိုင်းသားပုံစံကောင်းပါတယ်
4. Contacts အနောက်တိုင်းသားပါပဲ
5. Anger အနောက်တိုင်းသားပုံစံပဲ (ပွင့်လင်းတာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းပွင့်လင်းတော့လည်း..)
6. Queue when Waiting အနောက်တိုင်းသားလိုပဲ (စည်းကမ်းသည် လူ၏တန်ဖိုး)
7. Sundays on the Road အနောက်တိုင်းသားလို အေးအေးဆေးဆေး အပန်းဖြေတာပဲကောင်းပါတယ်
8. Party အနောက်တိုင်းသားလိုပဲ နေတာကောင်းမယ် ထင်တယ် (အပြင်ထွက်မရလို့ပြောတဲ့စကား)းP
9. In the restaurant အနောက်တိုင်းသား (တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲ ကောင်းပါတယ်) နားဒုက္ခရောက်လို့
10. Travelling ဒါတော့ တ၀က်စီပေါ့ (မျက်စိနဲ့ကြည့်တတ်သလို ဓါတ်ပုံရိုက်တာလည်း ၀ါသနာကိုးး)
11. Handling of Problems အနောက်တိုင်းသားတွေလို အဆင့်အတိုင်းပဲကောင်းပါလိမ့်မယ် (တဆင့်ချင်းတက်မှ ချော်မကျတာလေ)
12. Three mealsaday အစားကတော့.. အရှေ့တိုင်းနည်းနည်းဆန်သလားပဲး))
13. Tran sportation ဒါတော့ သိဘူး။ (စက်ဘီးရော ကားရော မမောင်းဘူး)
14. Elderly in day-to-day life အဖော်ကတော့ လူထက် ခွေးကပိုကောင်းမလား (ခွေးက
15. Moods and Weather (ကောင်းတဲ့ဖက်မှာ ရှိမယ်)းD
16. The Boss အနောက်တိုင်းသားလို တပြေးညီကြပါစေ
17. What's Trendy အင်း ဒါကတော့...အနောက်တိုင်းစာလည်း ကြိုက်သား
18. The Child အနောက်တိုင်းသားလိုနေတာ ပိုကောင်းပေါ့ (တသီးပုဂ္ဂလ)
Anonymous said... | Monday, May 31, 2010 5:27:00 AM
ဟုတ်ပါတယ်၊ No(15) ကမမှန်ပါဘူး။
အပေါ်က မယ်ကိုး ပြောတဲ့ ရုရှားက location Northern Asia မှာတော့သိတယ်။ culture ကတော့ အနောက်ဆန်မယ်ထင်တာ။ culture လဲ အရှေ့ဆန်တာကိုး..
နှင်းနဲ့မာယာ said... | Monday, May 31, 2010 11:11:00 AM
ကိက အရှေ့တိုင်းသားနဲ့ အနောက်တိုင်းသားအတွက်ပဲရေးထားတယ်...
အရှေ့မရောက် မနောက်မရောက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းသားအတွက်လဲ အချိန်ရရင် ရေးပေးအုံးနော်းးး))))
အချိန်တိကျတာကတော့ ဒီက အရှေ့အလယ်ပိုင်းဆိုတဲ့ အတိုင်း
အရှေ့မရောက် အနောက်မရောက် မှန်ချင်မှန်တယ်... မမှန်ချင်ရင်မမှန်ဘူးကိရဲ့....
ဒီကထွက်တဲ့ လေယာဉ်တွေက Delay ဖြစ်တာနဲ့ နောက်ကျတာကလွဲလို့ အေးဆေးပါ...းး)))))
ခိုင်နုငယ် said... | Monday, May 31, 2010 12:12:00 PM
ဖြိုးအောင် said... | Monday, May 31, 2010 7:30:00 PM
နံပါတ် ၅ အချက်ကိုတော့ ကျနော့် အတွေ့အကြုံအရ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေသလိုပဲ။
သူတို့က မကျေနပ်ရင် အများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာသာ ဒဲ့ဒိုးပြောတတ်တာ၊ တဦးချင်းကိစ္စဆို စိတ်ဆိုးမှန်း မသိရဘူး။ အပြုံးမပျက်ဆက်ဆံနေတာကို
ကြုံရတယ်။ နောင်မှ သူတို့ရဲ့ ပြောင်းသွားတဲ့ ပုံစံကို ကြည့်ပြီး စိတ်ဆိုးသွားတာ ဖြစ်မယ်လို့ တွေးယူရတယ်။
Anonymous said... | Monday, May 31, 2010 10:46:00 PM
တို့အနေနဲ့တော့ အများစုက အနောက်တိုင်းပုံစံနဲ့ အံဝင်တယ်..အထူးသဖြင့် နံပါတ်၃ အချိန် လုံးဝ တိကျမှကြိုက်တယ်...
ရွှေနတ်သား said... | Tuesday, June 01, 2010 1:15:00 AM
ဟိုဟာပြေးကြိုက်လိုက်.. ဒီဟာပြေး ကြိုက်လိုက်ပဲဗျို့.... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်ဘာမှန်းမသိဖြစ်နေပြီ
An Asian Tour Operator said... | Tuesday, June 01, 2010 2:51:00 PM
Angel Shaper said... | Tuesday, June 01, 2010 6:45:00 PM
အရှေ့က အနောက်ကို သဘောကျတယ်။
အနောက်က အရှေ့ကို သဘောကျတယ်.. ခစ်ခစ်
အခုလို ပုံနဲ့တကွ... တိတိကျကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးစ်းးးး
Angel Shaper said... | Tuesday, June 01, 2010 6:46:00 PM
ဏီလင်းညို said... | Tuesday, June 01, 2010 9:20:00 PM
(မရောက်တာ.....အတော်ကြာလို့ အနော့်အစ်မကို သတိရတယ်....)
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Tuesday, June 01, 2010 11:17:00 PM
အနောက်ကို မျှော်တာ မဟုတ်ပေမယ့် တချို့ အချက်လေးတွေမှာ အနောက်တိုင်း အယူအဆ လေးတွေကို သဘောကျတယ်။
ဘယ်တော့မှ မပြင်ချင်တာက မိသားစုနဲ့ စုစုစည်းစည်း သေတပန် နေချင်တဲ့ ဘဝလေ။
ကိုချစ်ဖေ said... | Wednesday, June 02, 2010 11:11:00 AM
အနောက်ကိုလျှောက်ပါလို့ အရှေ့ကိုတဲ့မျှော်လိုက်ရင် ဆိုပြီး သီချင်းကိုပြန်ပြင်ဆိုရမလိုဖြစ်နေပြီဒေါ်ကိရေ.
အသက်ကြီးရင်တော့ အရှေ့ကိုပြန်နေချင်တယ်.အခုလဲနေချင်နေတာပဲ.ကိုယ်က အရှေ့ကလာတဲ့သူမို့ အနောက်ကလူဆိုလဲ ဒီလိုပဲနေမှာပါပဲ..
Anonymous said... | Wednesday, June 02, 2010 6:21:00 PM
B..Sh.ts or horse dung! It is stereotyping or that is what westerners think they are
Working with westerners in the
Asian countries is different
from working with westerners
Anonymous said... | Thursday, June 03, 2010 12:13:00 AM
ဖတ်ပြီး တော်တော် ရင်စို့သွားတယ် အာရှသား ကျွန်တော်တို့ အတွက်...
Anonymous said... | Thursday, June 03, 2010 9:13:00 AM
thawzin said... | Thursday, June 03, 2010 5:17:00 PM
မှတ်သားစရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အစ်မဆီ အမြဲတမ်းမလာနိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးမှတ်သားစရာတွေကို အမြဲတမ်းလာတိုင်း မှတ်သားရပေမယ့် အမြဲတမ်းမလာနိုင်ပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဟုတ်တယ်နော် ခေတ်ရေစီးကြောင်းက အပြန်အလှန်လဲယူနေသလိုပဲနော်။ ဆရာတော်တစ်ပါးဟောတာ ကြားဖူးတယ်။ “ဒါယကာမလေးတစ်ယောက် မလုံမခြုံဝတ်လာမြင်တော့ ဘာလိုအဲလိုဝတ်သလဲတဲ့။ ခေတ်မှီအောင်လို့တဲ့။ ခေတ်ဆိုတာ မှီအောင်လိုက်နေရတာလားတဲ့။ တကယ်ဆို ကျောက်ခေတ်ကနေ အခုလိုလုံလုံခြုံခြုံ ခေတ်ကနေ ကျောက်ခေတ်ကို တပတ်လည်ချင်နေကြတာပါတဲ့။ တကယ်ဆို ငါတို့နိုင်ငံက ရှေ့အပြေးဆုံးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအရှိဆုံးပါတဲ့။” ပြောင်းလဲကုန်ပြီးအစ်မရေ။ အခုကာလမှာတော့ မမညီမလေးတွေ အလန်းဇယားတွေဖြစ်လာတာတော့ အမှန်ပဲဗျ။ စိုင်းစိုင်းလိုပဲ “ဒီခေတ်ကြီးမှာ မိန်းကလေးတွေလှတာ” ကုန်ပြီးဆရာပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်